Maxkamadda Ciidamada oo xukun ku riday Askari dil geystay – Soomaali 24 Media Network
Maxkamadda Ciidamada oo xukun ku riday Askari dil geystay
Posted on December 9, 2019 Leave a Comment on Maxkamadda Ciidamada oo xukun ku riday Askari dil geystay
Muqdisho-Soomaali24-Maxkamadda Darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa Maanta oo Isniin ah waxa ay xukun dil toogahso ah ku riday askari ka tirsanaa Ciidamada Dowladda,kaas oo la sheegay in uu diley Haweeney Ganacsato aheyd.
Dable Xoogga Dalka Cabdullaahi Cali Cumar ayaa loo heystaa dilka Marxuumad Dhibaay Maleele Maxamed oo ganacsata aheyd, dilkaas oo ka dhacay degmada Wallaweyn ee gobalka Shabeellada Hoose 23 May sanadkan.
Eedeysanaha oo muddo baxsad ka ahaa hey’adaha Amniga ayaa xafiiska Xeer Ilaalinta 01 August ee Sanadkan waxa uu weydiistay Garsoorka in la siiyo waaran lagu soo xiri karo Cabdullaahi Cali Cumar oo baxsad ah, waxa ayna xilligaas aqbashay Maxkamadda Codsiga dacwad oogayaasha.
Cabdullaahi Cali Cumar ayaa soo galay gacanta hey’adaha Amniga 28-kii September ee Sanadkan, waxaana xilligaas lagu soo wareejiyay xafiiska Xeer Ilaalinta oo codsaday in xabsiga dhexe loo taxaabo garsuge ahaan.
Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa baaris dheer kadib codsaday 16-ka bishii tagtay in la muddeeyo dhageysiga dacwadda ka dhanka ah Cabdullaahi Cali Cumar, waxa ayna Maxkamadda aqbashay dhageysiga dacwadda todobaad kadib.
Maxkamadda ayaa ugu horreynba u jeedisay eedda loo heysto Cabdullaahi Cali Cumar, waxaana sidoo kale Maxkamadda ay dhageysatay Cadeymaha iyo markaatiyaasha Maxkamadda la hor keenay.
Dadka ay dhageysatay Maxkamadda waxaa kamid ah Sarkaalkii u talin jiray Dable Cabdullaahi Cali Cumar, waxa uu Maxkamadda u sheegay in ay Fakad ka gudbiyeen eedeysanah, wixii intaas ka dambeeyane uu dhuumaaleysi ku ahaa waddada xiriirisa Yaaq Biri Weyne, IIdow Jaalle ilaa leego oo uu ka geysan jiray dhac.
Sidoo kale Maxkamadda waxa ay dhageysatay mid kamid ah dhibanayaasha gaadiidka ee Isticmaala waddada xiriirisa Muqdisho iyo Baydhabo, waxa uu u sheegay Garsoorayaasha in $300 kaga qaatay Isbaara ahaan eedeysanaha Maxkamadda hor taagan.
Ku xigeenka Xeer Ilaaliyaha Ciidamada Qalabka Sida Muumin Xuseen Cabdullaahi ayaa Maxkamadda u sheegay in eedeysanaha uu ahaa shaqsi caadeystay dhacca dadka, waxa uu u sheegay Maxkamadda in uu sidoo kale baxsad ka ahaa Ciidamada.
Muumin Xuseen Cabdullaahi oo ka hadlayay gabagabada Kiiska ayaa sheegay in Eedeysanaha Maxkamadda hor taagan oo dil bareer ah u geystay Marxuumad Dhibaay Maleele Maxamed oo aheyd haweeney Ganacsata ah oo aad looga yaqiinay Degmada Wallaweyn ee gobalka Shabeellada Hoose, waxa uu u sheegay Maxkamadda in eedeysanaha uu u dilay Marxuumadda deyn uu ka qaatay darteed.
Markaatiyaal afar ah oo ay ku jiraan dad uu dhac u geystay iyo kuwa ka marag kacaya dilka Marxuumadda ayay dhageysatay Maxkamadda, waxaa sidoo kale Maxkamadda la horkeenay cadeymaha warqadda waaranka Maxkamadda, Cabashooyinka gaadiidleyda iyo warqad uu ka qoray taliyihiisa.
Qareenka u dooday eedeysanaha ayaa Maxkamadda weydiistay in loo naxariisto oo lagu xukumo magta Marxuumada Dhibaay Maleele Maxamed.
Garsoorayaasha ayaa ugu dambeyn go’aan ku gaaray in lagu xukumo Dable Cabdullaahi Cali Cumar dil toogasha ah oo ah qisaasta Marxuumad Dhibaay Maleele Maxamed sida uu u sheegay dhinacyada dacwadda Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida
← DHageyso Mareykanka oo lagu eedeeyey in kaalin ku leeyihiin kobaca Weerarada Al-Shabaab.
DAAWODowladda oo Baaq Deg Deg ah ka soo saartay Dagaalka ka socda Gaalkacyo →
Copyright © 2020 Soomaali 24 Media Network